ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်အဆင့်ဝင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် – အပိုင်း(၂) | MoeMaKa Burmese News & Media
စက်တင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၂
4 Responses to ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်အဆင့်ဝင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် – အပိုင်း(၂)
မောင်ပျာလောင် on September 27, 2012 at 3:08 am
ရွှေပြည်စိုး ရဲ့တင်ပြမှုတွေကို ကျနော်အလွန်ကြိုက်ပါသည်၊ ဆက်လက်၍မှတ်တမ်းတင်ပေးပါရန်လည်းတိုက်တွန်းပါသည်။ ဆရာလုပ်ထာလည်းမဟုတ်ပါ အမေစုကို သတိပေးစရာလေးများလည်း စုစည်းတင်ပြပေးပါ၊ ပညာရှိသတိဖြစ် ဆိုတာကြားဘူးလို့ ပါ။ နောက်တစ်ခုက စစ်အာဏာရှင်များနှင့် ယှဉ်တွဲဖေါ်ပြပေးပါ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ရာနှုံပြည်ရှိနေတုံးက ပြည်သူအတွက်ဘာလုပ်ပေးကဲ့သလည်း – ? -၊ သေနတ်ပြောင်းဝက အာဏာတွေထွက်နေတုံးက အမေစု ပြည်သူ့ ဘက်ကမားမားရပ်နေခဲ့တာတွေ များများရေးစေ့ခြင်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အမေစု ဘုန်းတော်ဘွဲ့ ကြိုးသီချင်း ကြီးတော့မဖြစ်စေခြင်ပါ။ အကြံပြုတာပါ မှားရင်လည်းခွင့်လွှတ်ကြပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နဲ့ အတူ အမေစု ပုံပါတဲ့ ငွေစက္ကူများထုပ်လုပ်ဖို့ အချိန်တန်နေပါပြီ။ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေချိန်မှာ ငွေစက္ကူထုပ်လုပ်ခံရသူများကတော့၊ ယူကေ မှ ဘုရင်မကြီးရယ်၊ နယူးဇီလန်မှ ဧ၀ရက်တောင်ပထမဦးဆုံးတက်ခဲ့တဲ့ Sir Edmund P. Hillary တို့ ဖြစ်ထာကြောင့်၊ အမေစု သက်ရှိထင်ရှားရှိနေစဉ် အမေ့ပုံနဲ့ ငွေစက္ကူကို လူထုသုံးနေတာ – မချီ့ မဆန့် ဖြစ်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ မျက်နှာ သူတို့ မသေခင်မြင်ခြင်လို့ ပါ။ အမေစု သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေ – – –
Where r rubbish writers ? Read this article. on September 27, 2012 at 5:42 am
This is the high class writing .
Thank you Shwe Pyi Soe.
saw on September 27, 2012 at 1:35 pm
Tamanya sayardaw is not from Mon state
zaw on September 27, 2012 at 8:19 pm
အမေ.အတွက်တသက်လုံးဂုဏ်ယူမဆုံးပါ။ အမေ.ရဲ.အရည်အချင်း၊သတ်တိ၊စွန့် လွှတ်အနစ်အနာခံမှု၊သဘောထားကြီးမှု၊ဥာဏ်ပညာအမျှော်အမြင် စတဲ. ဂုဏ်ပုဒ်တွေကို ချီးကြူး ဝေဖန်ဖို.တော်ရုံအရည်အချင်းနဲ.မဖြစ်နိင်ပါ။